မတ်လအတွင်း Comeback လုပ်ဖို့ အစီစဉ်တွေရှိနေတဲ့ Kpop Idol အဖွဲ့များ…
On March 16, 2018 March 16, 2018 By fairy
မတ်လကတော့ Kpop လောကကြီးအတွက်အရမ်းကိုအလုပ်များတဲ့ကာလလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလထဲမှာ Male Group တွေ၊ Solo အမျိုးသားတေးသံရှင်တွေအများစု Comeback လုပ်ကြဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ရှိနေပါတယ်။ တချို့သော အနုပညာရှင်အသစ်လေးတွေကိုလည်းပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ့် ကာလလေးတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
`UP10TION´ Kpop Idol အဖွဲ့လေးကတော့ မနေ့မတ်လ၁၅ရက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ Album အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ `Invitation´ နဲ့အတူ Comeback လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်၁၀ဦးအနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးရှေ့တဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Boy Group တစ်ခုပါ။ အဖွဲ့ဝင် `Wooshin´ ကလည်းသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေနေကြောင့်အနားယူနေရာမှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
#UP10TION #2017SPECIAL_PHOTO_EDITION COVER TEASER 171012
A post shared by UP10TION (@u10t_official) on Oct 2, 2017 at 2:00am PDT
ဒီနေ့နေ့လည်မှာပဲ `A.C.E´ အဖွဲ့ကလည်း `5TAR´ ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ Single Album လေးကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
[#Sweet_Fantasy] A.C.E GLOBAL FAN-CON 2018 ‘Sweet Fantasy’ IN SEOUL 2차 포스터 _ [인터파크] https://goo.gl/QzPg12 _ [YES24] https://goo.gl/G6XF54
A post shared by 에이스 A.C.E (@official_a.c.e7) on Mar 5, 2018 at 3:01am PST
မတ်လ၁၉ရက်နေ့မှာတော့ ကောင်လေးချောချောလေးတွေပါဝင်တဲ့ `Wanna One´ အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ Mini Album ဖြစ်တဲ့ `0+1=1(I Promise You)´ဆိုတဲ့ Album လေးနဲ့အတူ Comeback အစီစဉ်လေးရှိနေပါတယ်။ ဒီ Album လေးမှာ `Boomerang´ ဆိုတဲသီချင်းလေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Wanna One အဖွဲ့လေးကတော့ သူတို့ရဲ့ `I.P.U´ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ Chart အတော်များများရဲ့နံပတ်တစ်နေရာကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
‪(남성미 대폭발!) 자켓 촬영 현장 비하인드‬ ▶http://tv.naver.com/v/2853392 . ‪Wanna One “0+1=1 (I PROMISE YOU)”‬ ‪TITLE TRACK ‘BOOMERANG(부메랑)’‬ ‪2018.03.19(MON) 6PM Release‬ . ‪#WannaOne #워너원 #BOOMERANG #부메랑 #IPROMISEYOU #약속해요‬
A post shared by Wanna One 워너원 (@wannaone.official) on Mar 12, 2018 at 9:10pm PDT
မတ်လ၂၁ရက်နေ့မှာတော့ `Seventeen´ အဖွဲ့ကို သူတို့ရဲ့ `Just Do It´ ဆိုတဲ့ Single Song လေးနဲ့အတူ မြင်တွေ့ခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
2018 SEVENTEEN SEASON’S GREETINGS WITH CARAT 2017.12.05 RELEASE #SEVENTEEN #SVT #CARAT #COMING_SOON
A post shared by SEVENTEEN (@saythename_17) on Dec 1, 2017 at 7:00am PST
`Yong Junhyung´ ကသူ့ရဲ့ Digital Single Song လေးတစ်ပုဒ်ကို မတ်လ၂၂ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးအတွက် `10cm´ အဖွဲ့ဝင် `Kwon Jung Yeol´ က Featuring သီဆိုပေးထားပါတယ်။
A post shared by HIGHLIGHT (@bigbadboii) on Feb 22, 2018 at 10:43am PST
မတ်လ၂၆ရက်နေ့မှာတော့ `Shinhwa´ အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ `20th Anniversary´ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ `All Your Dream´ ဆိုတဲ့ Track လေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
[NOTICE] SHINHWA TWENTY GIFT SINGLE ‘ALL YOUR DREAMS’ . #SHINHWA_TWENTY #신화 #SHINHWA #신화20주년 #ALL_YOUR_2018 #기프트싱글 #ALL_YOUR_DREAMS #에릭 #이민우 #김동완 #신혜성 #전진 #앤디 #ERIC #MINWOO #DONGWAN #HYESUNG #JUNJIN #ANDY
A post shared by 신화컴퍼니 (@shinhwa_official) on Mar 11, 2018 at 4:31pm PDT
အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ `MONSTA X´ အဖွဲ့က `The Connet´ ဆိုတဲ့ Album ကို ထုတ်လွှင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
‪171107 PM6#몬스타엑스‬ ‪<#THE_CODE> PREVIEW ‪#더코드 #드라마라마‬ #DRAMARAMA ‪#COMEBACK‬ ‪▶‬http://www.vlive.tv/video/46897 ‪▶https://youtu.be/NmRtFgnEeKo #MONSTAX #MONSTA_X #MONSTAGRAM #몬스타그램
A post shared by OFFICIAL MONSTA X (@official_monsta_x) on Nov 5, 2017 at 5:00am PST
`JYP Entertainment´ ကနေပြီး Debut လုပ်မယ့် `Stray Kids´ ဆိုတဲ့ Boy Group လေးကိုတော့ သူတို့ရဲ့ Mini Album ဖြစ်တဲ့ `I Am Not´ နဲ့အတူတွေ့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ၂၈ရက်မှာ တော့ `Hoya(Lee Ho Won)´ရဲ့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူဖန်တီးထားတဲ့ Mini Album လေးဖြစ်တဲ့ `Shower´ နဲ့အတူ Solo Debut လုပ်ဖို့အတွက် အစီစဉ်ရှိနေပါတယ်။ သူကတော့ `Angle´ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့လူသိများနေတဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးပါ။
-180207- Hourglass ⌛ musical ©Yoursonly – Goodafternoon hollies ? Haveablessing Saturday!! What are you upto today?? Me: I probably will start studying for my midterms since it’s closer than i imagine… – #hoya #leehowon #호야 #이호원
A post shared by Lee howon/Hoya (@isayhousaya) on Mar 2, 2018 at 10:06pm PST
မတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာပဲ `Samuel´ ကသူ့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် Mini Album ဖြစ်တဲ့ `One´ ကိုပရိတ်သတ်ကြီးဆီ ချပြဖို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
A post shared by Samuel 사무엘 (@bravpunxh) on Mar 14, 2018 at 2:24am PDT
မတ်လ၂၉ရက်နေ့မှာတော့ `Jung Joon Young´ က ´Fiancèe´ ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ Solo Single အသစ်လေးကိုထုတ်ဝေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by 정준영 Jungjoonyoung (@sun4finger) on Mar 13, 2018 at 2:19am PDT
`TVXQ´ အဖွဲ့ကတော့ မတ်လထဲမှာပဲ Comeback လုပ်မယ်လို့ကြေညာထားပေမယ့် ရက်အတိအကျတော့မသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
A post shared by @yunho2154 on Mar 15, 2018 at 8:01am PDT
`DreamCatcher´ အဖွဲ့လေးကတော့ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့စင်မြင့်အထက်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်လို့ပြောထားခဲ့ဖူးတော့ သူတို့လည်းမတ်လ လောက်မှာ Comeback အစီစဉ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
A post shared by DREAMCATCHER YOOHYEON (유현 ) (@yoohyeonkim) on Mar 10, 2018 at 8:25pm PST
`WINNER´ အဖွဲ့က လာမယ့် April လမှာသူတို့ရဲ့ New Album နဲ့အတူ Comeback လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။
A post shared by winner & winnercity (@winnercity) on Feb 14, 2018 at 6:57am PST
ကဲ…အခုဆိုရင် မတ်လအတွင်းမှာ Comeback လုပ်ကြမယ့် Idol တွေကိုလည်းသိရပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့်သီချင်းလေးတွေကို အားပေးကြပါဦးနော်။
PREVIOUS POST Previous post: သူ့ရဲ့ sexuality နဲ့ပတ်သက်ပြီး သို့လောသို့လောဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Harry Styles ရဲ့ Medicine!
NEXT POST Next post: JYP Entertainment မှနေပြီး Debut လုပ်တော့မယ့် `Stray Kids´